Xumbo cananaaska - Recipes Thermomix | Xeerarka ThermoRecipes
MacaanDaqiiqado 4Dadka 4Kalooriyeyaasha 90
Xumbo cananaaska waa si fudud in la sameeyo taasi waa ay kaa yaabineysaa. Waxaad ubaahantahay oo keliya 4 maado wax kabadan 5 daqiiqo waxaad yeelan doontaa macmacaan macaan oo aad ugu adeegto munaasabad kasta.
Maaha markii ugu horreysay ee aan sidan yeelno xumbo dhakhso leh. Ilaa hadda had iyo jeer waxaan ka sameynay miraha loo yaqaan 'strawberries' laakiin tan iyo markii aan isku daynay nuucaan waxaannu noqonnay kuwo lagu quudhsado dhadhankeeda kulaylaha ee khafiifka ah.
Sidaad qiyaasi karto, xumbada cananaaska waa fudeyd, marka haka waaban inaad u adeegto casho kadib ama cunno badan maxaa yeelay sidoo kale waa dheefshiidka.
1 Xumbo cananaaska
2 Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato xumbada cananaaska?
Cunto fudud oo aad u dhakhso badan oo loo sameeyo si loogu raaxeysto macmacaan naadir ah oo fudud.
Nooca cuntada: macmacaan
Waqtiga karinta: 4M
Wadarta waqtiga: 4M
50 g sonkorta bjchrk
300 g oo cananaas dabiici ah, diiray oo barafoobay
1 qaado (cabbirka macmacaanka) lime ama liin dhanaan
1 ukun qabow oo cad
Waxaan sonkorta ku shubnay muraayadda oo waanu karnay inta lagu jiro 10 ilbiriqsi, xawaare 10.
Kudar xabadka cananaaska la qaboojiyey kuna burburi iyaga 15 ilbidhiqsi, xawaaraha horumarka 5-7-10.
Balanbaalis ayaanu dul saarnay garbaha anagoo hubinayna inuu si fiican u dhigay. Ku dar liin dhanaanta iyo ukunta cad oo garaac 3 daqiiqo, xawaare 4.
Waxaan u qaybinaa muraayadaha ama muraayadaha oo waan u adeegnaa.
Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato xumbada cananaaska?
Macmacaankan ayaa ku fiican adeego xagaaga ama munaasabadaha gaarka ah maxaa yeelay waa macaan, nal iyo dheef-shiid.
Si aad u sameyso xumbada waxaad isticmaali kartaa nooca sonkorta ee aad ugu jeceshahay oo xitaa ku beddel macaaneeye ku habboon cuntadaada. Anaga jecel inay isticmaalaan sonkorta bjchrk ama xiltol oo ah ku habboon sonkorowga.
Marka macmacaankan ayaa kugu habboon adiga cananaaska waa in horay loo qaboojiyaa laakiin ka fogaanaya inay ku sii jiraan xayndaabka.
El xeeladdu waa in loo kala googooyo qaybo yaryar, iyaga saar saxaarad adoon taaban oo aad barafoojiso. Dhowr saacadood ka dib waxaad ku ridi kartaa boorsada weelka lagu rito. Sidan oo kale way sii dabacsan yihiin, markay timaado iyaga jajabinta, way fududahay in lala shaqeeyo.
Xumbadaani waa inay samee xilligan maxaa yeelay, haddii aad horay u sii sameyso, hoos ayey u dhaceysaa. In kasta oo ay dhakhso u tahay in la sameeyo taas oo ay mudan tahay in la abaabulo si loogu adeego iyada oo cusub.
Macluumaad dheeraad ah - Xumbo strawberry fudud / Cananaaska marmalade
Ku habo qaabkan cuntadaada qaabkaaga Thermomix
Soo ogow cuntooyinka kale: Cunto caafimaad leh, Si fudud, Postres, Cunnooyinka xagaaga
Wadada buuxda ee maqaalka: Heerkulbeegyada » General » Si fudud » Xumbo cananaaska
Sidee hodanka ah! Waan qaban doonaa iyada oo aan laga gaabin. Waan jeclahay cuntadaada.
Ku jawaab Maria Josefa
Aad baad ugu mahadsantahay faalladaada !!
Runtu waxay tahay inay tahay wax fudud in la sameeyo waxayna umuuqataa mid cajiib ah.
Dabcan, waa inaad sameysaa waqtiga saxda ah si aad ugu adeegto laakiin waa u qalantaa!
Jawaab Mayra Fernández Joglar
Waad salaaman tahay, halkii aad ku dari lahayd sonkorta bjchrk, ma dhigi kartaa sonkor dhalo ah? Mahadsanid
Haa, waad dhigi kartaa sonkorta shiidan iyo waliba sonkorta cad ee caadiga ah.
Qaddarku waa isku mid maxaa yeelay wuxuu leeyahay awood isku macaan, in kasta oo sonkorta bjchrk ay leedahay GI 7, oo aad uga hooseysa tan sonkorta, taas oo ah 70.
Actimel Guriga Lagu Sameeyo®